भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनी भन्छन्,‘लिपुलेक चीनमा छ, नेपालको मतलवको विषय हैन’ — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » अन्तर्वार्ता → भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनी भन्छन्,‘लिपुलेक चीनमा छ, नेपालको मतलवको विषय हैन’
भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनी भन्छन्,‘लिपुलेक चीनमा छ, नेपालको मतलवको विषय हैन’
August 6, 2015५९३ पटक
एसडी मुनी नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र नेपाल–भारत सम्बन्धबारे लामो समयदेखि लेख्दैरबोल्दै आएका भारतीय प्रोफेसर र पूर्वकूटनीतिज्ञ हुन् । भारतको रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आइडिएसए)मा गत साता नेपाल–भारत सम्बन्धको पछिल्लो आयामसहित भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे गरेको सहमतिलगायतका विषयमा एसडी मुनीसँग भएको कुराकानीः
मोदी सरकारको नेपालमा सबैभन्दा बढ्ता चासो वा विषय विकास हो कि सुरक्षा ?
भारतीय जनता पार्टीले सरकार बन्नुभन्दा पहिले विदेश नीतिसम्बन्धी एक कार्यक्रम पारित गरेको थियो । जसमा सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा र संस्कृति थिए । सम्मानको अर्थ तपाईं पनि सम्मान गर्नुस्, हामी पनि सम्मान गर्छौं । संवादको अर्थ, हरेक मामला वार्ता संवादबाट हल गर्छौं । समृद्धिको मतलब विकास, त्यसपछि बल्ल सुरक्षा । त्यसकारण सुरक्षाभन्दा अगाडि समृद्धिको एजेन्डा छ । समृद्धि भनेको विकास । भाजपाले विकासलाई सुरक्षाभन्दा बढ्ता महत्त्व दिएको छ । मोदी सरकारले त्यसैलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
नेपाल र भारतबीच ‘विशेष’ कूटनीतिक सम्बन्ध छ । तर, त्यही तहको विश्वासको संकट पनि छ । पछिल्लोपटक भारत र चीनबीच लिपुलेक नाका खोल्ने सहमतिले त्यसलाई थप स्पष्ट र्पायो हैन ?
तपाईं यो भन्दै हुनुहुन्छ कि, लिपुलेक पासको विषयमा भारतले चीनसँग सम्झौता गर्न नेपालको इजाजत माग्नुपर्ने थियो । नेपालले पाकिस्तान, चीनसँग सम्बन्ध राख्ने वेलामा भारतसँग सोध्नु जरुरी छ ? निश्चय पनि छैन । विशेष सम्बन्धको मतलब यो हो कि, नेपालको सुरक्षामा भारत सामेल छ, भारतको सुरक्षामा नेपाल । विशेष सम्बन्धको अर्थ तपाईंले तेस्रो मुलुकसँग दुईपक्षीय मामलामा वार्ता वा सहमति गर्न एकअर्काको इजाजत लिनुपर्ने भन्ने हुँदैन । लिपुलेकको जे प्रश्न हो, यो त्रिदेशीय बिन्दुको छेउमा छ । जुन हिस्सा भारत र चीनसँग छ, त्यसमा दुवै मुलुकले सहमति गरे । यसमा नेपाललाई केही असर नै पर्दैन, किन नेपाललाई सोध्नुपर्ने ?
त्यो त विवादित ठाउँ हो, जहाँ नेपाल र भारतको लामो समयदेखि वार्ता भइरहेको छ नि ! विवादित ठाउँ त कालापानी हो, लिपुलेक कसरी हो ? लिपुलेक त चीनमा छ । नेपालको दाबी त कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म छ र यसबारे वार्तामा पनि नेपालले कुरा राखिरहेको छ ।
नेपालले आफ्नो भनिरहेको, भारतले वार्ता गरौँ भनिरहेको जमिनमा भारत र चीनले सम्झौता गर्न मिल्छ ?
लिपुलेकमा कहाँ जमिन लेनदेनको सम्झौता भएको छ ? कसैलाई जमिन दिएको छैन । त्यो सम्झौता त सिर्फ यात्रीहरूको आवतजावतका लागि भएको हो । कैलाश मानसरोवर जाने यात्रीहरूलाई जानका लागि बाटो खुलाइएको मात्रै हो । त्यहाँ कसैले एक इन्च जमिन लेनदेन गरेको छैन, जस्ताको तस्तै छ । यो दाबी चीनसँग पनि गर्नुर्पयो नि नेपालले ? चीनसँग किन सोध्नुहुन्न यही कुरा तपाईंहरू ? तपाईं दाबी त जहाँको पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि । हाम्रो कास्मिरमा दाबी छ । चीनले पाकिस्तानसँग सम्झौता गरेर जमिन लियो । यो विश्वासको सवाल होइन । तपाईंहरूको विरोध मात्रै हो । नेपाल अहिले विरोध गर्ने मुडमा छ । हरेक चिजमा आरोपित गर्नुहुन्छ । भूकम्पमा मद्दत र्गयौँ, त्यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ । पहिला त विरोध थियो कि मनमोहन सिंह आउनुहुन्न, कुरै गर्नुहुन्न । मोदीले सल्लाह सुझाब गर्न सुरु गर्नुभयो, त्यसमा पनि नेपालले विरोध गर्न थालेको छ । यो समस्या हिन्दुस्तानका तर्फबाट छैन, नेपालको तर्फबाट छ । यो सबै कुरा मिडियामा चलिरहेको छ । नेपालले भारत सरकारसँग कुरा गरेर टुंग्याए भइहाल्यो नि ।
हामी लिपुलेकको विषयमा थियौँ । तपाईंले नै भनेजस्तो त्रिदेशीय बिन्दु हो भने पनि तीन देशको बीचमा कुराकानी हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
सुन्नुस् न, जमिन बाँडफाँड भएको हो र ? यात्रीहरूको ओहोरदोहोर लिपुलेक पासबाट हुँदा नेपाललाई के नोक्सान हुन्छ ? अर्को कुरा बेनिफिट बाँडफाँडको जुन प्रश्न छ, त्यो त परियोजनाहरूमा हुन्छ । । जस्तो, जलविद्युत् परियोजना बनाउनुस, पूर्वाधार बनाउनुस, यसमा त बेनिफिट सेयरिङ भइरहेको छ । यसमा थप सम्भावना पनि छ । भारतका तर्फबाट यो भनिँदै छ कि, हामी लगानी गर्छौं । यसबाट फाइदा त नेपाललाई पनि हुन्छ नि । अर्को कुरा, लिपुलेक सम्झौताबाट हिन्दुस्तान र चीनलाई के लाभ भइरहेको छ ? यात्री त पहिलेदेखि नै गइरहेका छन् । नयाँ मामला होइन । मलाई लाग्छ, लिपुलेक तपाईंहरूको भावनाको प्रश्न हो । कालापानीको मसला आजदेखि चलिरहेको हो र ? त्रिदेशीय विषयको कुरा त पुरानै समयदेखि चलिरहेको हो । तपाईंहरू ज्यादा संवेदनशील हुनुहुन्छ, कुरा यही हो । भूकम्पपछि सहयोग गर्न भारत गयो । तपाईंहरूले भन्नुभयो, मिति गुज्रेको परौठा भारतले पठायो । परौठाको डेट त भारतमा पनि हुँदैन । तपाईंहरू केवल भारतका लागि बढी सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ । दोस्रो देशका लागि हुनुहुन्न । चीनका लागि त तपाईंहरू संवेदनशील हुनुहुन्न । तपाईंहरूलाई के गर्दा खुसी पार्न सकिन्छ, भारतले बुझ्न सकेन । त्यत्रो सहयोग गर्दा पनि नेपाल खुसी छैन । सायद मोदीजी पनि सोचिरहनुभएको होला कि नेपाललाई कसरी खुसी पार्ने ? दुई अर्ब डलरको सहयोग दिँदा पनि नेपालबाट कसैले राम्रो भन्दैन ।
नेपाल र भारतको खुला सिमाना छ, गतिशील आर्थिक सहकार्य पनि छ, सुरक्षाकर्मीको पनि दुईपक्षीय रूपमा नै सहकार्य छ । तर, भारतका तर्फबाट सुरक्षा चासो थपिएको थपिएकै छ । यो विरोधाभास किन ?
यसमा विरोधाभास के छ ? तपाईंहरूको कोही मानिस बदमासी गरेर भारत आउँछ भने भारत सरकारलाई भन्नुस् कि फलानो मानिसलाई पक्राउ गरिदिनुस् । हाम्रा मान्छे गल्ती गरेर नेपाल जान्छ भने हामी तपाईंहरूलाई बताउँछौँ । यसका लागि भारत सुपुर्दगी सन्धि गर्न चाहन्छ, नेपालले चाहेकै छैन । सन्धि भयो भने एक हदसम्म हाम्रो सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्छ । यो नयाँ कुरा पनि होइन । खुला सिमाना चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने १९५० को सन्धि बदल्नुस् । १९५० को सन्धिअन्तर्गत नेपाल–भारत खुला सिमाना छ । कसरी बदल्ने, भारतलाई भन्नुस् । सिमाना बन्द गर्न तपाईंहरू चाहनुहुन्न, विशेष सम्बन्ध बदल्न तपाईंहरू चाहनुहुन्न । भारतमा लाखौँ नेपालीहरू छन् । विशेष सम्बन्ध नरहनेबित्तिकै उनीहरू त फिर्ता जान्छन् नै । ताली दुई हातले बज्छ, एक हातले मात्र होइन । खुला सिमाना चाहन्नुहुन्न भने बन्द गर्नुस्, चाहनुहुन्छ भने हाम्रा चासो सम्बोधन गर्नुस्, हामी तपाईंहरूको चासो सम्बोधन गर्छौं । हामीलाई कोही आइएसआईको एजेन्ट शंका लाग्छ भने भन्छौँ, तपाईंहरू पनि कोही त्यस्ता मान्छे भारतमा छन् भने भन्नुस् । सिमानामा हाम्रा एसएसबी छन्, तर आउने–जानेमा त कहीँ समस्या छैन । एसएसबीले कहीँ कसैलाई रोकेको छैन । काठमाडौं–दिल्ली, पोखरा–दिल्ली सुचारु छ । आवतजावत भइरहेको छ । त्यसकारण १९५० को सन्धिपछि दुवै देशबीच विशेष सम्बन्ध रहेको र खुला सिमाना कायम भएको हो । त्योभन्दा अघि हिन्दुस्तानमा अंग्रेज थिए । त्योभन्दा अगाडि नजाऊँ । मेरो भनाइ के हो भने विशेष सम्बन्धको मामला १९५० को सन्धिदेखि चलिरहेको छ । अहिले तपाईंहरू सन्धि बदल्न चाहनुहुन्छ । नेपालका कतिपय मानिस भनिरहेका छन् सीमा बन्द गरौँ । यदि तपाईंहरू खुला सिमाना चाहनुहुन्न भने बन्द गरिदिनुस् न । दुई छिमेकीको बीचमा झगडा हुन्छ र एउटाले पर्खाल लगाउन चाहन्छ भने लगाइदिए हुन्छ ।
सन्धि बदल्नका लागि २००२ मा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, भारत त्यसमा सकारात्मक भएन । त्यसयता भारत सकारात्मक नहुँदा यो टुंगोमा पुगेको छैन नि ?
एउटा प्रस्ताव मैले तपाईंलाई दिएँ र तपाईंलाई मन परेन भने भन्नुहुन्छ कि अर्को ल्याउनुस् । कमल थापाले के प्रस्ताव ल्याउनुभयो, मलाई याद भएन । तर, सायद प्रस्तावमा केही त्यस्ता विषय थिए जसलाई हिन्दुस्तानले स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन । हिन्दुस्तानले त्यही भन्यो । यो त धेरै पहिलाको कुरा हो । तर, त्यसपछि हामीले कति समयदेखि भन्दै आएका छौँ कि सन्धि बदल्न चाहनुहुन्छ भने प्रस्ताव गरौँ । प्रचण्ड र बाबुरामलाई पनि हामीले भन्यौँ किनभने सन्धि पुनरावलोकन वा खारेजी गर्न उनीहरूले नै सबैभन्दा बढी जोड दिइरहेका थिए । हामीले मनमोहन अधिकारीजीलाई पनि यही कुरा भन्यौँ । हिन्दुस्तानले एउटा प्रस्ताव मानेन भने दोस्रो प्रस्ताव दिनुस्, त्यो पनि मानेन भने अर्को दिनुस् ।
सन्धिका बारेमा तपाईंको धारणा चाहिँ के छ ?
यो दुईपक्षीय मामला हो । दुवै राजीखुसी हुनुपर्छ । जस्तो, तपाईंले मलाई भेट्ने चाहना राख्नुभयो । मैले स्वीकार गरेँ । अहिले मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । यदि मलाई अनुकूल थिएन भने बोलाउँदिनथेँ होला । त्यसकारण दुवै पक्षले मानेपछि न सम्झौता वा सन्धि हुन्छ, एकपक्षीय चाहनाले मात्रै कहाँ हुन्छ ? दुईमध्ये एउटाको सुविधा हुँदैन भने किन गर्ने ? नेपाललाई कुन–कुन क्षेत्रमा यो सन्धि सुविधाजनक लाग्दैन, त्यो बताओस् । कहाँ–कहाँ सुविधा छ, त्यो बताओस् । हामी पनि त्यहीअनुसार आफ्ना प्रस्ताव राखौँला । दुवैको सुविधाजनक अवस्थामा सन्धि पुनरावलोकन गरौँ । खारेज गर्न चाहनुहुन्छ भने सन्धिको अन्तिम धाराअनुसार चिठी लेख्नुस् । पुनरावलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने वार्तामा बस्नुस् । अरू उपाय केही छैन ।
१९५० को सन्धिकै कारण नेपालले तेस्रो देशबाट हतियार ल्याउँदा भारतले विरोध गर्ने गरेको छ । भारतीय एउटा तप्काले त भारतमा नेपालीहरूलाई भारतका नागरिकसरह व्यवहार भएको तर नेपालमा भारतीयहरूलाई त्यस्तो नभएकाले सन्धि असमान छ भन्ने तर्क गरेको छ । तपाईंको विचारमा यसको समाधान कसरी हुनुपर्ला ?
हामी भनिरहेका छौँ, नेपालले हतियार खरिद गर्नुछ त गर्नुस् । यदि हाम्रो भूभागबाट तपाईंले हतियार लैजानुहुन्छ भने हामीलाई सूचना दिनुपर्छ । किनभने तपाईंकहाँ आएको हतियार हाम्रो पृथकतावादी समूह, हतियारधारी समूहले दुरुपयोग नगरोस् ।
१९८९ मा नेपालले चीनबाट हतियार ल्याउँदा भारतीय भूमि प्रयोग गरेको थिएन । तर, तपाईंहरूको तर्फबाट त्यो कदम १९५० को सन्धिविपरीत भयो भनेर नेपालमाथि नाकाबन्दी नै लाग्यो । सन्धिले नेपाललाई तेस्रो देशबाट हतियार ल्याउन रोकेको छैन । तर, भारतले किन यसलाई इस्यु बनायो ?
हेर्नुस, सरकारी तवरमा यस्तो सहमति भएको छ कि जब नेपालले हतियार हामीलाई सोधेर मगाओस्, हामी हतियार दिन्छौँ । नेपालमा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने जति पनि हतियार भारतले लगभग निःशुल्क दिएको छ । अथवा अत्यन्तै थोरै मूल्यमा दिएको छ । यसैकारण हाम्रा आर्मीहरू (नेपाली सेना र भारतीय सेना) भाइभाइजस्ता छन् । नेपाल र भारतका आर्मी चिफ एकअर्काका मानार्थ चिफ यही कारण न छन् । तपाईं यसलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने बन्द गर्नुस् । तर, जबसम्म यो सम्बन्ध कायम हुन्छ, हामी भन्छौँ कि, तपाईं हतियार ल्याउने विषयमा हामीलाई भन्नुस् । हामीले दिन सक्ने दिन्छौँ, नसक्नेजति बाहिरबाट ल्याउन भन्छौँ । किनभने, हतियारसँग सम्बन्धित जे सम्झौता भएको छ, त्यो मान्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो । यो चीनसँगको मात्रै मामला होइन । चीनसँग त राजा वीरेन्द्रले गडबड गरे । यो छाडिदिनुस् । तपाईं अमेरिका, युरोप, रुससँग हतियार लिनुहुन्छ र भारत हुँदै लानुहुन्छ भने भारतसँग त सोध्नुपर्छ नि । यो स्पष्ट सम्झौता छ । बंगलादेशबाट भारतका विद्रोही ग्रुपलाई कति हतियार आइरहेको छ ? एक–अर्कालाई सुरक्षा खतरा नहोस् भन्ने कुरा न हो । तपाईं हरेक दफामा नजानुस, तर सन्धि रुचिकर छैन भने खारेज गर्न सक्नुहुन्छ । पुनरावलोकन गर्नुहुन्छ भने वार्ता गर्नुस् । सन्धिमा केही यस्ता विषय छन्, जसमा नेपालीलाई बेफाइदा छ । तपाईं आफूलाई जे फाइदा सोच्नुहुन्छ, भारतलाई त्यसमा फाइदा हुँदैन भने सन्धि हुँदैन । भारत र नेपाल दुवैलाई फाइदा हुने गरी मात्रै सन्धि हुने हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल, भारत र चीनबीच गतिशील पुल बन्न सक्ने अवधारणा राखेपछि त्यसबारे नेपालको बौद्धिक वृत्तमा काफी छलफल भइरहेको छ । तपाईं यो अवधारणाबारे के भन्नुहुन्छ ?
भारत र चीनबीच अहिले करिब सय अर्ब डलरबराबर दुईपक्षीय व्यापार भइरहेको छ । योभन्दा पनि बढ्छ । हामी सिक्किम, बर्मा, बन्दरगाहबाट चीनमा जान सक्छौँ, उनीहरू पनि त्यहाँबाट आउन सक्छन् । नेपाललाई व्यापार गर्नुछ भने चीनसँग कुरा गर्नुस् । सडक यातायात बनाउनुस् । अघि बढ्नुस् । तपाईं यति राम्रो बाटो बनाउनुस् कि मानिसहरू सिक्किमबाट हैन, नेपालबाट चीन जान सकून् । तर, डा. बाबुरामजीले भनेजस्तो नेपालले जुन पुल बनाउन चाहन्छ, त्यसमा चीनको रुचि छैन ।
नेपाल र चीनबीचको यातायात तिब्बत हुँदै जाने हो । तर, चीनले तिब्बतमा नाका खोल्न चाहन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ? तिब्बतलाई चीनले खोल्न चाहँदैन भने सामान्य रूपले चीनमा आवतजावत सम्भव छैन । सामान्य रूपमा आवतजावत हुन सक्दैन भने कसरी व्यापार हुन सक्छ ? त्यसमा कसलाई कहाँ फाइदा हुन्छ ? पुरानो जमाना थियो, जतिवेला नेपालले तिब्बत वा हिन्दुस्तानमा सामान किनेर एक–अर्कालाई बेच्ने गथ्र्यो । त्यो वेला विकल्प पनि थिएन । अहिले त्यो जमाना छैन । तर, तपाईंहरू चाहनुहुन्छ भने बाटो बनाउनुस, व्यापार गर्नुस, हाम्रो भन्नु केही छैन । जहाँसम्म भारतको प्रश्न छ, हामी चीनसँग सोझै व्यापार गरिरहेका छौँ भने तेस्रो देश (नेपाल)सँग किन भर गर्ने ? यसको के जरुरी छ ?
तर, डा. भट्टराईले भन्नुभएको थियो कि, गतिशील पुलसम्बन्धी अवधारणामा चीन सकारात्मक छ, भारत सशंकित छ । तपाईंले त चीन चाहँदैन भन्नुभयो ।
चीनले सकारात्मक जवाफ दियो, किनभने उसलाई थाहा छ कि यो अवधारणा भारतले मान्नेवाला छैन । तपाईंको चीनसँग सीमा खुला छैन । चीनमा त खुला रूपमा तपाईंहरूको सामान जान सम्भव छैन । तर, हामीसँग तपाईंको सिमाना खुला छ । चीनबाट तस्करी गरेर आएका सामान भारतीय बजारमा त जान सम्भव छ । जब सिमाना खुला गर्नु नै छैन भने चीनले कसरी भट्टराईजीको अवधारणालाई मान्नेवाला छ ? जहाँसम्म हाम्रो प्रश्न छ, यो अवधारणा भारतका लागि कुनै पनि हिसाबले फाइदाजनक छैन । त्यसकारण हामीले किन मान्ने ? भारत र चीनबीच झगडा भएको अवस्थामा गतिशील पुलको काम आउने हो नेपालमार्फत् । झगडा नै छैन भने किन यो बाटो अपनाउने ? तपाईंहरू पुल बन्न चाहनुहुन्छ भने बन्नुस् । तर, हामी त्यतिवेला यसबारे छलफल गर्छौं, जतिवेला हामीलाई जरुरी हुन्छ । अहिले हामीलाई यो जरुरी छैन ।
त्यसो भए भारत र चीनबीच मजबुत आर्थिक सम्बन्धबाट बीचमा रहेको नेपाललाई चाहिँ फाइदा के हुन्छ त ?
तपाईंहरू दुवै देशसँग सम्बन्ध मजबुत पार्नुस् । त्यो नेपालले चाहँदैन । बाबुरामजीले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौतामा उनकै पार्टीले विरोध गर्याे । हामी भन्दाभन्दै थाकिसक्यौँ । जलविद्युत्को विकास गर्नुस्, लगानी ल्याउनुस्, बेच्नुस् । चीनबाट लगानी लिनुस्, भारतमा बेच्नुस् । फाइदा छ नि नेपाललाई । तपाईंहरू हिन्दुस्तानको अर्थतन्त्रसँग जोड्नुस् । मोदीजीले लगानी गर्छु भन्नुभएको छ, लगानी लिनुस, पूर्वाधार बनाउनुस, सडक रेल बनाउनुस् । चीनसँग पनि यही गर्नुस् । भारत र चीनलाई सन्तुलित बनाउने नेपाली मानसिकताले काम गर्दैन । कतिपय मामलामा चीनले यसलाई सहज मान्नेछैन, कतिपय मामलामा भारतले मान्नेछैन ।
नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको छ भन्ने भारतीय बुद्धिजीवी वृत्तमा साह्रै नै चर्चा सुनियो । यदि यो सही हो भने भारतको प्रतिक्रिया के हुन सक्छ ?
नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको हुन सक्छ । यसमा हाम्रो खास चासो छैन । हाम्रो चासो यति मात्रै हो कि, त्यो प्रभाव भारतको हितविपरीत नहोस् । नेपालमा भारतको हितविपरीत चिनियाँ प्रभाव बढ्यो भने भारतले यसको प्रतिकार गर्छ । तपाईंहरू चिनियाँ प्रभाव बढाउन चाहनुहुन्छ भने बढाउनुस् । अर्को कुरा, तपाईंहरूकहाँ चिनियाँ प्रभाव के बढेको छ र, हिन्दुस्तानमा पो चीनको उपस्थिति बढेको छ, प्रभाव बढेको छ । व्यापार ज्यादै छ, ज्यादा आवतजावत छ । सैन्य अभ्यास भइरहेको छ । ब्रिक्सको सदस्य छौँ । हाम्रो चीनसँग जति सम्बन्ध छ, त्यो स्तरमा नेपालको चीनसँग के सम्बन्ध छ ? नेपाल र भारतको सांस्कृतिक सम्बन्ध यति गहिरो छ कि कसैको प्रभावले त्यसलाई केही फरक पर्दैन । तपाईं जति दोस्ती गर्नुहुन्छ, गर्नुस् । केवल चिन्ता हो कि नेपालमा चीनको प्रभाव भारतको नोक्सानका लागि नहोस् ।